Sweden ayaa mamnuucday dadka ka soo gala Norway caawa -
Home News Sweden ayaa mamnuucday dadka ka soo gala Norway caawa
Dowlada Sweden ayaa ku dhawaaqday xayiraad dhanka socdaalka ah oo laga soo galo Norwey maalintii Axada, si loo yareeyo halista noocyada cusub ee cudurka coronavirus uu ku faafo.
“Mamnuucitaanku wuxuu soconayaa saqda dhexe ilaa Febraayo 14-keeda waana la kordhin karaa haddii loo baahdo”, Wasiirka Arrimaha Gudaha Mikael Damberg ayaa ka sheegay shir jaraa’id galabnimadii Axadda.
Xayiraadda gelitaanka ee Boqortooyada Ingiriiska iyo Danmark ayaa sidoo kale la kordhiyay illaa iyo 14-ka Febraayo.
Isla mar ahaantaana, wasaaradda arrimaha dibaddu waxay dib u soo bandhigaysaa talooyinka ka dhanka ah safarka aan loo baahnayn ee lagu tagayo Norway. Go’aanka ayaa ansax ah illaa ogeysiis dambe
Bishii Diseembar, Iswidhan waxay ku dhawaaqday in laga mamnuucay u safridda Sweden ee labada waddan ee UK iyo Danmark sababo la xiriira nooc cusub, taas oo ay ahayd markii hore bil ugu dambaysay.
Waxyaabaha ka reeban go’aanka dowlada ayaa khuseeya kuwa ka shaqeeya Iswiidhan ama leh baahiyo qoys oo deg deg ah, iyo sidoo kale gaadiidka xamuulka.
Sabtidii Jannaayo 23-keedii, dawladda Noorway waxay soo bandhigtay xayiraad taxane ah oo aad u adag Oslo iyo sagaal degmooyin kale oo dheeraad ah sababo la xiriira dillaaca nooc cusub ee cudurka coronavirus ah, oo markii ugu horreysey lagu arkaay dalka Ingiriiska.
Isbeddelka fayraska Ingiriiska ayaa horey uga jiray Iswiidhan. Ilaa iyo hada, ilaa 50 kiis ayaa la xaqiijiyay, badankoodna waxay kuxiranyihiin dad dibada ku maqnaa, sida ay sheegtay wasaradda caafimaadka bulshada.
Go’aanka dowlada ee ku aadan xayiraada safarka Norway ayaa daba socota talo ka timid hey’ada caafimaadka bulshada.
“Waa go’aan aan caadi ahayn, oo aan ugu yaraan tixgelinayn soohdinta dhulka ee dheer ee u dhaxaysa dalalka,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha Demberg.
Wuxuu intaa ku daray inay hada muhiim tahay in si dhow loola socdo horumarka sida viruska isbadalku ugu fiday Norwey wuxuuna tilmaamay awooda lagu ogaan karo isbadalka viruska cusub aay leedahay Sweden waana ku filan tahay waqtigaan.
Previous articleDagaal caawa ka socda Beled Xaawo iyo Ciidanka C/rashiid Janan oo gudaha u galay….
Next articleMexican President Lopez Obrador tests positive for Covid-19, mild symptoms